Ergeyga Mareykanka ee Somalia iyo Madaxweyne Faroole oo Garoowe ku kulmay (Sawiro) – SBC
Ergeyga Mareykanka ee Somalia iyo Madaxweyne Faroole oo Garoowe ku kulmay (Sawiro)
Ergayga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya James Swan iyo xubno ka socday qarmadada Midoway kuwaas oo maanta ka soo degay Garoonka diyarahada Conoco ee Magalada Garowe halkas oo ay ku soo dhaweyeen Xubno ka tirsanaa Golaha Xukumada Puntland kadibna loo soo galbiyay Xarunta Madaxtoyada oo uu kulan albabadu u xirnayeen la qaatay Madaxda Puntland.
Inkastoo markii kulankaasi uu u soo dhamaday uu si wada jira u la hadlay Warbaahinta Madaxwaynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole iyo Egrayga Gaarka ah ee Arimaha somaliya Maraykanka u qabilsan James Swan.
Madaxwynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Maxauud Faroole oo ku hormaray fahfahinta kulanka labada dhinac ayaa ugu horayn uga mahad celiyay imatinka Ergaygaan tan iyo markii la soo magacabay bishii ogos ee sanadkaan iyo waxyabaha ay ka wada hadleen.
James Swan oo ah ergayga gaarka ah ee Maraykanka u qabilsan Arrimaha Somaliya oo isna hadlay ayaa dhiniciisa shegay ay tahay markii ugu horaysay uu yimaado Puntland isla markaasna kulamada uu la qaatay madaxda Puntland ay yihiin kuwa isku soo dhawaynaya Somaliya iyo Maraykanka,
Waxa uu intaasi Raaciyay Ergeygu in uu qayb ka yahay Socdalkaani hirgalintii qodobadii ka soo baxay shirki Kampala.
Inta shirku socday waxaa sidoo kale qayb ka aha Ganacsatada iyo ururadda Bulshada kuwaas oo fikiro ka dhiibanayey wada hadalka albabadu u xirnayeen, waxana uu isla maanta dib ugu noqday Ergaygaani iyo xubnihii la socday Magalada Nairobi.
Filo sawiro badan….